अब सजिलै घट्छ पेटको बोसो, अपनाउनुहोस् यी आयुर्वेदिक टिप्सहरु ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»अब सजिलै घट्छ पेटको बोसो, अपनाउनुहोस् यी आयुर्वेदिक टिप्सहरु !
अब सजिलै घट्छ पेटको बोसो, अपनाउनुहोस् यी आयुर्वेदिक टिप्सहरु !
By Anisha Khatri June 10, 2022 No Comments2 Mins Read
आयुर्वेदमा यस्ता धेरै कुरा छन् जसलाई स्वास्थ्यका लागि प्रयोग गरेमा धेरै समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । आजको समयमा बढ्दो मोटोपनाबाट अधिकांश मानिसहरु हैरान छन् । पेटको बोसो होस् वा दुबै, तपाईंले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आयुर्वेदमा रहेको केही उपायले मोटोपनाको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । आज हामी तपाईंलाई पेटको बोसो हटाउने तरिका बताउनेछौँ।
पेटको बोसो हटाउने आयुर्वेदिक टिप्सहरु यस प्रकार छन्:
यदि तपाई पेटको बोसो हटाउन चाहनुहुन्छ भने अदुवा तपाईको लागि निकै उपयोगी हुनसक्छ । अदुवा भित्र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू पाइन्छ जसले धेरै खानुबाट मात्र रोक्दैन तर पाचनलाई उत्तेजित गरेर भोक पनि कम गर्छ।
पेटको बोसो हटाउन कागती धेरै उपयोगी हुन सक्छ। कागती भित्र एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू पाइन्छ जसले पाचनलाई बढावा दिने मात्र होइन शरीरलाई डिटोक्सिफाइ गर्न पनि उपयोगी हुन्छ। कागतीको सेवनले मेटाबोलिजमलाई पनि धेरै हदसम्म बढाउन सकिन्छ।
यदि तपाई पेटको बोसोबाट हैरान हुनुहुन्छ भने त्रिफला पनि तपाईका लागि निकै उपयोगी हुन सक्छ । त्रिफला आयुर्वेदमा पाइने प्रभावकारी औषधि हो । एकै समयमा, यो धेरै समस्याहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा त्रिफलाको प्रयोगले पेटको बोसो घटाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्रिफलाको सेवनले पेटको बोसो मात्र जलाउन सक्दैन, शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पनि प्रभावकारी हुन्छ ।
पेटको बोसो कम गर्न चाहनेले अत्यधिक पानीको सेवन गर्नुपर्छ । यो निकै प्रभावकारी उपाय हो । नियमित अन्तरालमा पानी पिउँदा तपाईंको मेटाबोलिजम रेट बढ्छ जसका कारण तपाईंको विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन पाउँछ भने शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ ।